मानवीय चाप नहुँदा बसपार्क संचालनमा समस्या | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार मानवीय चाप नहुँदा बसपार्क संचालनमा समस्या
on: ११ चैत्र २०७५, सोमबार १२:०४ प्रदेश समाचार
चैत ११, फिदिम । हालै सञ्चालनमा ल्याइएको पाँचथरको फिदिम २,पल्लोटारस्थित स्थायी बसपार्कको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । शहर विस्तार हुने अनुमानका आधारमा फिदिम बजारबाट झण्डै डेढ किलोमिटर दूरीमा रहेको पल्लोटारमा निर्माण गरिएको बसपार्क कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।
दुई दशक अघि निर्माण थालेर गत मङ्सिरबाट सञ्चालनमा ल्याइएको बसपार्कमा यात्रु पुग्न कठिनाइ परेको छ । मानवीय चाप नहुँदा सवारी साधन समेत यहाँ पार्किङ हुन सकेका छैनन् । यात्रु सबै बजारमा रहने हुँदा बसपार्क प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको यातायात व्यवसायीको भनाइ छ ।
फिदिम, पाँचथरसहित ताप्लेजुङ र पूर्वी तेह्रथुमको आठराइका स्थानीयको दैनिक चाप हुने बजार हो । स्थायी बसपार्कको अभावमा यहाँका यातायात व्यवसायीले फिदिम माध्यमिक विद्यालयको जग्गा भाडामा लिएर अस्थायी बसपार्क सञ्चालन गरिरहेका थिए । बढ्दो मानवीय तथा सवारी साधनको चापलाई व्यवस्थित गर्न २०५१ सालबाट फिदिम नगरपालिका २, पल्लोटारमा स्थायी बसपार्क निर्माण थालिएको थियो । १० जना स्थानीयले निःशुल्क प्रदान गरेको ९ रोपनी जमीनमा सुविधायुक्त बसपार्क निर्माण गरिएको हो । उक्त समयदेखि हालसम्म सरकारले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर स्थायी बसपार्क निर्माण गरेको हो । गत वर्ष मात्रै रू. १ करोड ९० लाख बजेट बसपार्कको स्तरोन्नतिमा खर्च गरिएको नयाँ शहर आयोजना कार्यालय फिदिमले जनाएको छ ।
यात्रुको सम्पर्कभन्दा बाहिर रहेका कारण यो बसपार्क कार्यान्वयनमा कठिनाइ परेको हो । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रमुख जनकराज तिम्सिनाका अनुसार बसपार्कमा मानवीय चाप शून्यप्राय हुने गर्दछ । ‘प्रायः यात्रु सदरमुकाममा नै केन्द्रित हुन्छन्’,तिम्सिनाले भने ‘बजारभन्दा टाढा भएका कारण सवारी साधन बसपार्कमा ल्याई पुर्‍याउनै समस्या छ ।’ बसपार्कमा उत्रने तथा सवारी साधन चढ्ने यात्रु नै नहुने हुँदा यहाँ सवारी साधन पुर्‍याउनु पर्ने बाध्यता मात्रै रहेको यातायात व्यवसायी नीलम गिरीको भनाइ छ । बसपार्कमा पुर्‍याउनैपर्ने बाध्यताले यात्रु र सवारी चालकले अनावाश्यक दुःख पाएको गिरीको गुनासो छ ।
फिदिम बजारबाट स्थायी बसपार्क पुग्न पैदलयात्रा गर्दा करीब ३० मिनेट समय लाग्छ । अटोरिक्सालगायत साधनले रू. ५० भाडा लिने गर्दछन् । यसकारण यात्रु सवारीलाई आफ्नो पायकमा बोलाइ चढ्ने गर्दछन् । यस क्रममा सवारी चालक, प्रहरी र नगर प्रहरीबीच तनावको स्थिति सिर्जना हुने गरेको छ ।
मानवीय चाप,अव्यवस्थित सवारी पार्किङका कारण बढेको दुर्घटनाको सम्भावनाजस्ता कारणले स्थायी बसपार्कको कार्यान्वयन अनिवार्य रहेको फिदिम नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरी बजारभित्र टिकट काउण्टर सञ्चालन नगर्न र लामो समय निर्धारित स्थानभन्दा अन्यत्र सवारी साधन पार्किङ नगर्न आग्रह गरेको छ । रासस
सडक निर्माण पछि सहज
८ मंसिर २०७५, शनिबार १२:४०